Pokémon GO yatove kubudirira muAustralia | IPhone nhau
Chokwadi iwe watoverenga dzimwe nhau dzichizivisa izvo Pokémon GO yatorova iOS neApple app zvitoro. Dai tanga tisina kunyora chero chinhu, imhaka yekuti kusvika kwayo pazvitoro izvi kuri kudzadzarika uye parizvino kuri kungowanikwa muUnited States, New Zealand, United Kingdom neAustralia, asi kune mamwe marondedzero anonakidza ayo tafunga kushambadza mimwe yemutambo uyu.
Pokémon GO ndeye Kuwedzera Kwechokwadi mutambondiko kuti, mutambo watichashandisa kamera ye iPhone yedu kuti tione mifananidzo chaiyo uye panowanikwa Pokémon. Chinhu chakashata ndechekuti, kana tikaterera kune yedu smartphone, isu hatiteerere zvakakwana kune nyika yakatikomberedza uye mapurisa eAustralia akato fanirwa kunyevera vamwe vashandisi kuti varege kutakurwa vachiyedza kutora Sandshrew.
Pokémon GO inogona kunakidza, asi mapurisa eAustralia anoyambira nezve njodzi dzayo
Chinhu ndechekuti, imwe yenzvimbo kwaunogona kuwana Sandshrew iri mu Darwin Police Station, kuchamhembe kweAustralia, uye vamwe vamiririri vakatoyambira nezvematambudziko angangosangana nevashandisi. Kana mumwe munhu achiedza kutora iyi Pokémon, zvavari kuita kutarisana pachiratidziri uye vanogona kuyambuka mugwagwa usina kutarisa kana motokari ikasvika. Zvakare, vamwe vavo vari kupinda zvakare kukamba yemapurisa.
Vashandisi vanoda kutamba Pokémon GO uye vasiri munyika dzine rombo rakanaka vanogona kungoshivirira uye kumirira kuti isvike kuApp Store munyika mavo. Parizvino, mutambo yatove kubudirira muAustralia.
Yakazara nzira kuchinyorwa: IPhone nhau » IPhone maapplication » IPhone mitambo » Pokémon GO yatove kubudirira muAustralia, asi mapurisa anoyambira nezve njodzi dzayo
Ndakavhura account muAustralia app chitoro ndikaitora nezuro, zvinonakidza kunyangwe ini ndisingafarire chokwadi chekuvimba neGPS kutamba
Mhoro Manuel. Zvine musoro. GPS ndiyo inonyanya kudya, kunyanya kana iri kushandiswa kune chimwe chinhu. Kuonekwa seichi, chakanaka panguva imwechete chakaipa: chinhu chakanaka ndechekuti iwe unogona kuvhima Pokémon chero nguva; chakashata ndechekuti bhatiri rinofa.
Manuel iwe unogona kundikweretesa yako account yeAustralia kuti ndiitore ndeyokuti ikozvino vakaguta uye ini handigone kugadzira account
Kwazisai Pablo, iwe uchaona kuti harisi kana iro zvakanyanya dambudziko rebhatiri asi zvakanyanya dambudziko rekuti, kana iyo GPS ikaratidza kukanganisa, unosara usina kutamba, kare nhasi iyo GPS yandipa kukundikana uye ini ndaisakwanisa 20km kubva panzvimbo iyo avatar yaive ichiri munzvimbo iyoyo
Manuel iwe unogona kundikweretesa yako account yeAustralia kuti ndiitore ndeyokuti ini handikwanise kugadzira account
Apple inosiya zvimwe zvikamu zvisina kunyorwa muIOS 10 beta 2